Smarter Time - Time Management - Productivity Android 1.166 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း Android 1.166 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း Smarter Time - Time Management - Productivity
Smarter Time - Time Management - Productivity ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Update ကို: Windows နဲ့ Mac ကွန်ပျူတာ clients များအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွင့်လင်း software ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်တစ် Linux ကို client ကိုယခုကဆက်ပြောသည်ပွီ!
သင်၏အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု Boost ။ လက်ျာအလုပ်-ဘဝချိန်ခွင်လျှာဒဏ်ခတ်။ သင့်ရဲ့အာရုံနှင့်သင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, သင့်ဖုန်းကိုအချိန်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
1 ။ သင်တို့နေရာ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ယူမှုဦးနှောက်ယူဆထားခြင်းမျှသာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်တို့ပြုကြလော့။
2 ။ ဒါဟာသင်တီဗီ showering သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်, အိပ်ပျော်နေသော, ဖတ်နေရှိမရှိ, ရှိသမျှကိုသင်၏လှုပ်ရှားမှုများအသေးစိတ်အချိန် log ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
3 သင်ကသင့်ရဲ့အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏တိကျသော analytics ရ။ , သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာပြည့်စုံသော, အလိုအလျှောက်အချိန် tracker ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုဂတိတော်ကို
- Lite ဗားရှင်း features တွေ -
- တချို့ကအန်းဒရွိုက် 5.0 ကို LG နဲ့ Samsung ဖုန်းများ app ကိုအသုံးပြုမှုစာရင်းဇယားမှဝင်ရောက်ခွင့်မပေးပါဘူး
Smarter Time - Time Management - Productivity အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Smarter Time - Time Management - Productivity အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Smarter Time - Time Management - Productivity အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Smarter Time - Time Management - Productivity အား အခ်က္ျပပါ
appsgalore စတိုး 1.85k 419.04k
Smarter Time - Time Management - Productivity ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Smarter Time - Time Management - Productivity အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း Android 1.166
ထုတ်လုပ်သူ Smarter Time
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.smartertime.com/terms
ဗားရွင္း: Android 1.166
လက်မှတ် SHA1: 1B:FE:0D:39:8A:B2:78:4A:E7:C1:A7:03:62:77:FE:29:27:72:14:26
အဖွဲ့အစည်း (O): Smartertime
Smarter Time - Time Management - Productivity APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ